कमिसनखोरीबाट विकास संभव छैन् : डा. भट्टराई - Nepal Abhiyan
रामेछाप– नयाँ शक्ती पार्टी नेपालका संयोज डा. बाबुराम भट्टराइले सत्तामा पुगेर कमिसन लिनेहरुबाट देशको विकास नहुने बताएका छन् । मंगलबार रामेछापमा पार्टीको असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले चुनाब जितेर सत्तामा पुग्ने र कमिसन खोरीहरुबाट कमिसन लिनेहरुले देशको कुनै पनि विकास गर्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले अहिलेका सांसदहरु चुनाब जित्ने र सत्तामा पुगेर कमिसन खोरीसँग कमिसन लिएर फेरी त्यही पैसा लिएर चुनाबताका गाउँमा जाने प्रबृत्तीमा लागेको आरोप समेत लगाए ।
पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा भट्टराइले भ्रष्टचार नियन्त्रण गरी शुसासन कायम गर्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपती हुनु पर्ने बताए । नेपाल जस्तो देशमा मिश्रित प्रणलीको संसदिय व्यवस्थाबाट विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
संयोजक भट्टराइले काग्रेस र कम्युनिष्टहरुको दिमागमा एकै ठाउँ बसेर समृद्धि देख्ने प्रवितिले बिकास संभव नभएको आरोप समेत लगाए । चिवाभञ्ज्याङ पाँचथर देखि झुलाघाट बैताडी सम्मको जनसम्बाद यात्रामा रहेको भट्टराई मंगलबार रामेछाप आइपुगेका हुन् ।